DAAWO SAWIRADA: iska horimaad ka dhacay duleedka Magaalada paris. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRADA: iska horimaad ka dhacay duleedka Magaalada paris.
Qaraxyo iyo is rasaaseyn xoog leh ayaa laga maqalay duleedka Paris kadib markii ciidamo Boolis ah oo hubeysan ay isku dayeen inay baaraan guri ay ku tuhunsanaayeen inay ku jiraan dadkii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Jimcihii hore magaalad Paris.
Haweeney ayaa isqarxisay warar kalana waxa ay tilmaamayaan in labo ruux ay dhinteen toddobo kalana ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ay qabteen, Haweenyedan is qarxisay ayaa loo maleynayaa in ay tahay xaaska AbdelHamid ayna kamid ahayd dadkii weeraray tiyaatarkii dadka badan ay ku dhinteen.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in weli hal ruux uu ku jiro gudaha dhismaha la weeraray lana rumeysan yahay in uu ahaa qofkii ka dambeeyay weerarka kaas oo ay ku dhinteen illaa 129 ruux.
Abdelhamid Abaaoud, oo ah 27-jir haysta dhalashada Beljima balse asalkiisu yahay Moroccan ayaa loo malaynayay weerarkan inuu ka soo maleegay dalka Siiriya.
Waddooyinka ku xeeran Rue de la Republique ee deegaanka Saint Denis, oo ah meel u dhow garoonka ciyaaraha ee Stade de France ayaa la xirey.
Ciidamo faro badan ayaa la geeyay halkaa iyadoo iska horimaad socday muddo saacad ah haatan uu u muuqdo mid istaagay.
Degmada Saint Denis ayaa ah meel dadka degen ay u badan yihiin ajaaniib dhaqamo iyo diimo kala duwan leh sida dad ka soo jeeda Africal,India,Shiinaha,Turkey iyo wadamo kale. Dadka ku nool degmadaas ayaan inta badan heli karin shaqooyin maadaama aysan haysan ruqsada shaqada.
Shan ka mid ah ciidamada Booliska ee weerarka ka qeybqaatay ayaa dhaawacmay iyadoo sidoo kale uu ku dhintey mid ka mid ah eeyda wax urisa oo ay ciidamadu doonayeen inay ku ogaadaan in miino halkaa la dhigay.
Hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan ka lagu doonayo in lagu helo qof wlilaga shakisan yahay in uu ku jiro gudaha guriga.